Ny onitra ho an'ny fahatarana ny sidina. AirHelp. ~ Journey-Assist - Famakiana boky
Pejy fandraisana » Torohevitra mahasoa Travel » Onitra ho an'ny fahatarana ny sidina. AirHelp.
Ny onitra ho an'ny fahatarana ny sidina. overbooking
Matetika na tara na kivy ny sidina, saingy tsy tokony hiaritra an'izany ianao. Raha nandritra ny 3 taona lasa izay nahitan'ny fanemorana sidina ianao, ny fanafoanana na famandrihana, dia afaka manantena fanonerana amin'ny vola 600 ianao.
Airhelp - Mpitondra eran-tany amin'ny fanonerana ny fahatarana
Inona no manao izany asa
Nahoana no mahasoa ny mitodika any amin'ny matihanina
Inona no valisoa azonao antenaina?
Inona ny atao hoe famandrihana
Inona koa no azonao atao ny mandoa onitra
AirHelp - mpitarika manerantany amin'ny fanonerana ny fahatarana
Airhelp - mpitarika eran'izao tontolo izao eo amin'ireo orinasa izay manampahaizana manokana amin'ny fiarovana ara-dalàna ho an'ny olona mampiasa fitaterana rivotra. Airhelp soa aman-tsara manampy ny mpandeha amin'ny sidina nanomboka tamin'ny 2013.
Representatives of Airhelp miteny 16 fiteny. Ny biraom-paritra dia manana mpiasa 700 avy amin'ny firenena samihafa, ao anatin'izany ny ekipa mpisolovava maro manokana momba ny fiarovana ara-dalàna ny mpandeha amin'ny fiaramanidina.
Airhelp mikatsaka ny hiantoka fa ny mpanjifa dia karamaina amin'ny serivisy kalitao tsy mahomby amin'ny seranam-piaramanidina, matetika kokoa noho ny orinasa hafa avy amin'ireo miasa ato amin'ity sehatra ity. Afaka manampy ireo mpanao dia lavitra any amin'ny firenena rehetra isika, satria manana mpisolovava avy amin'ny firenena 30 mahery isika.
Manampy amin'ny mpandeha fiaramanidina ny AirHelp hitaky onitra amin'ny fanelingelenana sidina (fanemorana, fanafoanana na famoahana boky). Ny serivisy toy izany dia omen'ny orinasa mandritra ny 6 taona. Hatramin'izao, AirHelp dia efa nanampy mihoatra ny 10 ny mpandeha izay nanana olana toy izany rehefa manidina.
Miaraka amin'ny AirHelp, ny fangatahana onitra dia lasa tsotra sy mora be. Tsy mila mpandeha lava sy mandreraka ankehitriny ny mpandeha intsony. Mampiasa ny fahalalany, ny traikefa ary ny teknolojia maoderina ny manam-pahaizana manokana mba hiantohana ny fametrahana mahomby amin'ny fampiharana tsirairay.
Tsy misy fiomanana!
Ny tombony lehibe amin'ny AirHelp dia ny hoe tsy mitaky fandoavana mialoha amin'ny mpanjifa ny orinasa ary maka vola fotsiny raha toa ka voavaha soa aman-tsara ny olana!
Noho izany, mitodika any amin'ny AirHelp ianao dia tsy manimba na inona na inona ianao. Eny tokoa, raha tsy nahomby ny fangatahana nataonao, ny orinasa dia tsy hitaky fandoavam-bola avy aminao, na dia mandeha amin'ny raharaha ara-dalàna aza izany.
Noho izany, raha mandà ny fahafaham-po ny fitakianao ny sidina dia mandehana fotsiny any amin'ny tranokalan'ny AirHelp ary ampidiro ny mombamomba anao amin'ny sidina amin'ny endrika fanamarinana sidina. Ho fanampin'izay dia ho afaka mandefa hafatra ho an'ny manampahaizana manokana amin'ny AirHelp ianao izay nalefan'ny orinasam-habakabaka ho valin'ilay fitarainana (afaka mandefa mailaka na hafatra SMS izy ireo). Io dia hahafahan'ireo solontenan'ny AirHelp hamaritra tsara ny maha-manan-kery ny fandavana ny onitra. Ary raha ny manampahaizana momba ny AirHelp dia nanatsoaka hevitra fa tena mahazo karama ianao, hanomboka hiasa amin'ny fampiharana anao izy ireo.
Vokatra amin'ny fandoavana
Ny habetsaky ny fanonerana dia karamaina amin'ny euro ary miankina mivantana amin'ny halaviran'ny sidina.
Sidina 1500km - 250 Euro
Sidina 3500km - 600 euroо
Famatsiam-bola kitapo miankina amin'ny lafin-javatra isan-karazany, fa amin'ny $ 50 dia salanisa
Ny onitra ho an'ny entana very. Tafakatra hatramin'ny 1500 $
Raha toa ka mifandray amin'ny lalàna Rosiana ny sidina, dia izao fanonerana enti-bidy hatramin'ny 600 roubles isaky ny 1 kg ny kitapo.
Indraindray, ny orinasam-pitaterana dia afaka manolotra vazivazy fanonerana tapakila tapakila mandritra ny taona, nefa tsy mendrika ny manizingizina azy ireo, ary afaka mitaky vola ianao).
Fa maninona ianao no tokony hitodika any amin'ny matihanina
Tanjona ny orinasa dia ny hanampy ny mpanjifa hahazoana onitra noho ny fikorontanana amin'ny sidina. Rehefa mandefa fangatahana amin'ny alàlan'ny vavahadin-tserasera AirHelp ny mpandeha iray dia handray ny olana ny matihanina. Noho izany, hanavotra ny rafozonao sy ny fotoana tokony handanianao ny fomba fiasa birao ianao raha toa ka nametraka fitakiana tamina fiaramanidina.
Ny zonao dia harovana amin'ny orinasam-pifandraisana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao manam-pahaizana manokana amin'ny fandoavana ny onitra.
AirHelp Mobile App
Aorian'ny famenoanao ny fangatahana onitra, manome anao data ilaina, dia mety aminao ny hampiasa ny fampiharana finday AirHelp hifehezana ny toe-javatra.
Ampidino ny fampiharana finday avy AppStore
Ampidino ny fampiharana finday avy Google Play
Mobile version tranokalan'ny orinasa koa manana ny fahafaham-po sy ny fandidiana haingana. Misaotra an'izany, azo atao ny mandefa fangatahana ary manamarina ny toeran'ny sidinao manokana avy amin'ny fitaovana finday na dia tsy mametraka ny fampiharana AirHelp aza.
Raha hanonona ny Wikipedia aloha:
Ny overbooking dia tetikady mivarotra ho an'ny entana (serivisy), izay ny mpamatsy entana (serivisy) dia mandray andraikitra bebe kokoa amin'ny fanomezana entana (serivisy) mihoatra ny vitan'izy ireo, amin'ny fiandrasana fa tsy ny adidy rehetra izay tanterahana dia tokony ho tanteraka.
Inona izany ary inona no mahasahy mikasika ny lohahevitrao. Ny zava-misy dia amin'ny zotram-piaramanidina malaza matetika no mivarotra maromaro fanampiny tapakila, manantena fa misy olona noho ny antony ilainy miovaova hevitra lalitra na manidina fotsiny tara ny tara. Saingy raha tonga tampoka teo amin'ny seranam-piaramanidina ny olona rehetra nividy tapakila, dia misy toe-javatra iray mipoitra fa betsaka ny mpandeha misoratra anarana amin'ny sidina fa tsy misy seza. Vokatr'izay dia iray amin'izy ireo tsy manidina. Ary "faran'izay be loatra" izany dia namaly vola.
Inona no azonao atokisana amin'ny tambin-karama
Famaliana fanafoanana ny sidina
Ny onitra ho an'ny kitapo nahemotra na very
Famadihana Dock tsy hita
Famatsiam-bola raha misy fitokonana ataon'ny mpiasan'ny fiaramanidina
Ny sandan'ny serivisy AirHelp fototra dia 35% amin'ny sandan'ny tambin-karama aminao
Raha mila manakarama mpisolovava mpikarama ianao hanao fitsarana, dia mitentina 15% fanampiny amin'ny fandoavan-danja ny serivisy omena anao
Ny serivisy hafa rehetra mifandraika dia omen'ny orinasa maimaimpoana.
Ny isa voalaza etsy ambony dia efa tafiditra ao amin'ny VAT.
Torohevitra mahasoa Travel
Ny iliny sy ny cons. Rivotra, ranomasina, lalamby, fiara ...
Izahay mividy tapakila mahasoa
Fitsipika mifehy ny rivotra
Mitahiry hotely izahay. Tips
Inona no tsy adino amin'ny dia?
Manangona ny entana izahay, marina
Andraikitry ny fiaramanidina. overbooking
Miara-mandeha amin'ny ankizy izahay
Mivezivezy amin'ny dia izahay
Photo Monetization Apps
Ny fanampiana voalohany
AirHelp - fandoavana ny sidina fiaramanidina
Mampalahelo fa tsy ny sidina rehetra avy any Rosia ka hatrany amin'ny firenena Azia Atsimo Atsinanana no milatsaka mahazo tombony noho ny fahatarana.